Indlu enembono emangalisayo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguNikolaos
Le Ndlu yanamhlanje ngumgangatho ophantsi wendlu yabucala ebekwe phezu kwenduli. Ijikelezwe ziihektare ezi-4 zegadi entle enengca eluhlaza kunye namatyholo afumanekayo ukuzonwabisa kunye nokudlala. Imizuzu nje embalwa kude neelwandle zecrystal crear kunye neeMbasa ze "Blue Flag" zika-2019. Ii-BRs ezi-3 zihlalisa ngokukhululekileyo abantu aba-5. Indawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokubona indawo. Iintsapho kunye nabantwana kunye neentsapho ziya kuyithanda
I-Villa imiswe phezu kwenduli encinci kunye nembonakalo yolwandle ekhethekileyo yeBay of Patra yonke kwaye imalunga ne-2 Km ukusuka elunxwemeni. Indlu ijikelezwe yi-private 4000 sq.m. indawo ezele yimithi yomnquma, kunye negadi entle enemithi yeMeditera namatyholo. Indawo inoxolo kakhulu kwaye ilungele ukuphumla kunye nokuphumla. Indawo yokupaka yabucala iyafumaneka ngaphakathi kwePropati.
Umgangatho ophantsi Indlu izimele ngokupheleleyo ukusuka kumgangatho woku-1 kwaye inomnyango wayo owahlukileyo. Kukho ii-BR's ezinkulu ezi-3: 1 enebhedi ephindwe kabini, i-1 kunye ne-2 iibhedi ze-single kunye neye-3 enye enebhedi enye. Kukho igumbi lokuhlala elinendawo yokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kwindawo enye.
Abantu abahlanu banokulala ngokukhululekileyo kwii-BRs kwaye umntu omnye unokulala kwisofa kwi-LR.
Indlu lukhetho olufanelekileyo lweholide kwiintsapho ezinkulu okanye amaqela abantu. Inokuba sisetingi samaxesha okuphumla ecaleni kweelwandle zamanzi ekristale okanye iziko lasekhaya lohambo oluya kwiindawo ezininzi ezinomdla kunye neendawo zakudala ezinomdla kule ndawo.
Siyithanda kakhulu le ndawo njengoko sikhulele apho abantwana bethu kwaye yayiyindawo yethu yeholide esiyithandayo. I-villa imalunga ne-1,5 Km kude nelali ekufutshane yaseKalamaki ukuze uxolo kunye nokuphumla phakathi kweegadi kunye neentyatyambo yeyona nto ibalaseleyo ye-villa.
I-villa ibekwe malunga ne-1,5 km okanye umgama wemizuzu emi-3 ukusuka kwilali yaseKalamaki apho umntu unokufumana iikhefi, iithaveni, iimakethi ezincinci kunye nekhemesti. Ngaphakathi kwe-10 Km radius umntu unokufumana iithaveni ezongezelelweyo, iindawo zokutyela, iiklabhu kunye neendawo zokuhlala ebusuku.
Kumgama omfutshane kakhulu ukusuka kwi-villa umntu unokufumana iilwandle ezicocekileyo zolwandle kwaye ukonwabele ukuqubha okanye ukutshiswa lilanga. Uninzi lweelwandle lunokufikelela simahla kodwa umntu unokufumana iilwandle ezicwangcisiweyo ezibonelela ngezixhobo zemidlalo yamanzi, ukutya, ikofu njl.
Ngaphambili yidolophu yaseKato Achaia eneZiko lezeMpilo lendawo kunye nesixeko sasePatra esineendawo zokukhenketha ezibalulekileyo. Isibhedlele saseYunivesithi yasePatra sikwakhona.
Ukuba umntu uthatha isigqibo sokuhamba imigama emide unokutyelela iindawo ze-archeological of Olympia okanye Delphi.
Hello! I am an English speaking professional and my wife and I are happy to host people in our countryside villa. Over the last year we had the opportunity to host several people from various countries and we loved the experience of making new acquaintances and expanding our horizons. We always do our best to offer the traditional Greek hospitality to our guests . Nikolaos
Hello! I am an English speaking professional and my wife and I are happy to host people in our countryside villa. Over the last year we had the opportunity to host several people f…
Umnini uya kwamkela iindwendwe ngokwakhe kwaye uya kunika lonke ulwazi oluyimfuneko malunga nendlu kunye nommandla ukuze ukuhlala kwabo kukhululekile. Kwakhona uya kudibana nabo xa sele bekulungele ukuhamba baze banyamekele naziphi na iinkcukacha zomzuzu wokugqibela. Ngexesha eliseleyo iindwendwe ziya kushiyeka zodwa kwi-villa ukuze zonwabele ubumfihlo bazo ngaphandle kwawo nawuphi na umsebenzi oyimfuneko wokulungisa ekufuneka wenziwe. Umnini uza kufumaneka ngefowuni ukunceda iindwendwe ngayo nayiphi na ingxaki abanokuba nayo.
Umnini uya kwamkela iindwendwe ngokwakhe kwaye uya kunika lonke ulwazi oluyimfuneko malunga nendlu kunye nommandla ukuze ukuhlala kwabo kukhululekile. Kwakhona uya kudibana nabo xa…
Inombolo yomthetho: 00000434887
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kalamaki, Achaia, West Greece